Sezivaliwe izindaba zesiZulu esiteshini sikamabonakude | News24
Sezivaliwe izindaba zesiZulu esiteshini sikamabonakude
Cape Town – Isiteshi sikamabonakude, u-e.tv kanye nophiko lwaso lwezindaba, u-eNCA sebekunqamulile ukwethulwa kwezindaba ngolimi lwesiZulu maphakathi nezinsuku, ngemuva kweminyaka emithathu nohhafu njengoba lesi siteshi siqhubeka nokunciphisa ukwethula kwazo izindaba.
Lezi zindaba zesiZulu bezithatha isigamu sehora kanti bezididiyelwa yi-eNCA, engaphansi kwenkampani i-eMedia Investments, nalapho bezisakazwa khona esiteshini i-eKasi+, kwi-OpenView HD (OVHD) engaphansi kwePlatco Digital.
OLUNYE UDABA: Unqatsheliwe u-e.tv uzama ukulaxaza izindaba za-6:30
Kodwa-ke kuthe ngokuphela kukaMashi lezi zindaba zanqanyulwa ngesikhathi u-e.tv enquma ukulaxaza lesi siteshi maqede wafaka esisha i-e.tv Extra endaweni yaso.
Lokhu kulahleka kwezindaba zesiZulu kungesinye sezinyathelo zakamuva ku-eNCA sokunciphisa izinhlelo zezindaba kanye nezindleko zakhona ngaphansi kobuholi bukaMark Rosin, oyi-eMedia Investments Group Chief Operating Officer (COO).
Eminyakeni emibili eyedlule lesi siteshi sesikhombise ukungazithakaseli izinhlelo zezindaba njengoba sibonakala sesigxile kakhulu ezinhlelweni zezokujabulisa.
U-e.tv awuzange wenze simemezelo ngalokhu kuvalwa kwezindaba sesiZulu isigubhukane.
Kuzokhumbuleka ukuthi lesi siteshi sisanda kuhluleka emizamweni yaso yokuthi singabe sisazisakaza izindaba zesiNgisi ngesikhathi esithathwa njengesibalulekile (prime pime), nezingena ngo-18:30 kusihlwa.
Inhlangano elawula ezokusakaza kuleli i-Icasa yasichitha isicelo sayo.